घरमा श्रीमती छँदैछे नि भनेर ढुक्क नहुनुस… १ मिनेट समय निकालेर सबैले पढ्नुहोस-मनोविद,करुणा कुँवर |
घरमा श्रीमती छँदैछे नि भनेर ढुक्क नहुनुस… १ मिनेट समय निकालेर सबैले पढ्नुहोस-मनोविद,करुणा कुँवर
करुणा कुँवर ,मनोविद
श्रीमान विदेश गएको गएको छ भने जन्मान्तर हुने नै भयो । विदेशमा काममा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । पैसा कमाएर कसलाई पठाउने भन्ने कुरामा पनि अन्योल विदेशमा बस्नेहरुलाई हुन्छ ।५/६ वर्षसम्म विदेश बस्दा समयको अन्तर पनि त हुने भयो । त्यो समयअन्तरले धेरै कुरालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसकारण परिवारमा द्वन्द्व भएको छ । धेरै किसिमका समस्याको सामना पुरुषले पनि गरिरहेका छन् । चिन्ताका कारण प्रगति गर्छु, सम्पत्ति जोड्छु भन्ने कुरा नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
आत्महत्या विश्वमै जटिल विषय बनेको छ । व्यक्तिलाई दुःख भएको, मेरो जीवन नै के रहेछ र ? भन्ने महसुस हुन थाल्यो भने त्यसपछाडी धेरै कुरा हुन सक्छन् । मानिस निरास हुन थाल्छ । त्यसले आत्महत्याको अवस्थासम्म पुर्‍याउँछ ।यस्तो बेलामा घरपरिवारका सदस्य र साथीभाइले विचार गर्न सक्छन् । आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्तिले आफूलाई मर्न मन लागेको कुरा कुनै न कुनै रुपमा भनिरहेका हुन्छन् । ह्या बाँचेर के छ र ? मलाई मर्न मन लाग्यो, जीवन के हो र ? भन्ने जस्ता कुराहरु कुराकानीका क्रममा उसले भनिरहेको हुन्छ ।कोही मानिस एक्लै बस्न थाल्यो, खाना राम्ररी खान सकेको छैन भने पनि उसको राम्रोसित ख्याल गर्नुपर्छ । त्यतिबेला विशेषज्ञसित सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । ढिला गर्न हुँदैन ।
परपुरूषकाे अाराेपलगाउदै कपनमा श्रीमानद्वारा श्रीमतीको छुरी हानी हत्या
देवरद्वारा बोल्‍न नसक्ने ५५ वर्षीय भाउजुमाथि बलत्कारको प्रयास
आजको राशिफल २०७५ कार्तिक २६ गते सोमबार
आजको राशिफल २०७५ कार्तिक २५ गते आइतबार
आजको राशिफल २०७५ कार्तिक २७ गते मङ्गलबार
झापाको भद्रपुरमा दुर्घटना, एकको मृत्यु, दुई घाइते
युवतीलाई भगाएर विवाह गरेको विषयमा विवाद हुँदा ८ जनाको टाउको फुट्यो, अाठै जनाकाे अवस्था गम्भीर
आजको राशिफल २०७५ कार्तिक २३ गते शुक्रबार
झापाको कनकाई नगरपालिकामा पिकअपको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
दमकमा कारको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, कार चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा